'मलाई कसैले बुझ्दैन' - के गर्नु पर्ने जब तपाइँ गलत मतलव महसुस गर्नुहुन्छ - ब्लग
'मलाई कसैले बुझ्दैन' - के गर्नु पर्ने जब तपाइँ गलत मतलव महसुस गर्नुहुन्छ
'मलाई कसैले मनपराउँदैन, सबैले मलाई घृणा गर्छन्, मलाई लाग्छ कि म जानेछु र गँड्यौलाहरू खान्छु ...'
... त्यसैले जान्छ गीत यसले निराशा, दु: खी, र रीसलाई अलि अलि अलि बेस्सरी हावा दिन्छ जब हामीमा गलतफहमी भएको महसुस हुन्छ।
'मलाई कसैले बुझ्दैन!' एक साधारण पर्याप्त उद्बोधन हो जब हामी यो अकाट्य विश्वास द्वारा कुकुरिएका हुन्छौं कि अन्य व्यक्तिहरू हामी प्राप्त गर्दैनन् कि हामी को हौं वा हामी कसरी महसुस गर्छौं।
वा जब व्यक्तिले हाम्रो प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्वीकार गर्दैन वा हामी बाँच्न रोज्छौं।
बुझाइएको एक पर्याप्त आधारभूत मानव आवश्यकता हो किनकि यो हाम्रो सम्बन्धित हाम्रो भावनाको चाबी हो।
यसको सबैभन्दा आधारभूत सहज उत्पत्तिमा फर्किएपछि मानव विकासको प्रारम्भिक चरणबाट बच्न यस समूहको भाग हुनु आवश्यक थियो।
यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि भावनालाई गलत अर्थ लगाईयो, र यसैले पृथक गरिएको छ, यस्तै भारी र उत्तेजक संवेदना हुन सक्छ।
र वास्तविकता यो हो कि, यदि तपाईं आफू को हुन् भनेर स्वीकार्नुहुन्न भन्ने सोच्नुहुन्न भने, तपाईं तीव्र एक्लोपन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य व्यक्तिहरूद्वारा घेरेको भए पनि।
वास्तबमा, बहिष्कारको अनुभूति र पृथक गर्न वास्तवमा समूह स्थितिमा तीव्र गर्न सकिन्छ - तपाईंको ‘भिन्नता’ स्पटलाइटमा राखिन्छ र तपाईलाई लाग्दैन कि तपाईको हैन ।
मानवीय अवस्थाको वास्तविकता यो हो कि कहिलेकाँही हामी आफैं हुनको लागि हामीलाई साहस दिनको लागि अरूहरूको मान्यकरणको आवश्यकता पर्दछ, हामी जान्दछौं कि हामी यसको आलोचना वा न्याय हुँदैनौं।
यसले हामीलाई एक 'जनजाति' को अंश महसुस गर्न अनुमति दिन्छ।
पूर्ण विश्वास छ कि हामी को लागि स्वीकार्य छौं हाम्रो मानसिक र भावनात्मक हितको लागि हामी महत्त्वपूर्ण छौं।
यसको विपरित रूपमा, यदि हामी बुझ्छौं कि ती नजिकका व्यक्तिहरू हाम्रो जीवन छनौट वा दृष्टिकोणहरूको आलोचनात्मक छन् भने, भित्री द्वन्द्वले हामी भित्र नकारात्मक भावनाहरू उत्पन्न गर्दछ जुन अत्यन्तै दर्दनाक र सबैभन्दा खराब विनाशकारी हो।
त्यसोभए, आपसी गलतफहमीको यस हानिकारक गतिरोधबाट बच्न, त्यहाँ अरूले तपाईंलाई आफू वास्तवमा आफू भएको व्यक्ति नभई वास्तवमा आफू जस्तो हुनु चाहेको व्यक्तिको हो भनेर बुझाउने एउटा तरिका छ?
कसरी एक सम्बन्ध मा एक जरूरी महिला हुन छैन
यसलाई थप अनुसन्धान गरौं ...
समाधान तपाईं संग निहित छ।
यस समस्याको समाधान वास्तवमा तपाईंसँग सुरू हुन्छ, बरु उनीहरूसँग भन्दा जसलाई तपाईंले गलत ठान्नुहुन्छ र तपाइँको छनौट।
पहिलो चरण भनेको आफैंको गहिरो समझ विकास गर्नु हो, किनकि यदि तपाईंले वास्तवमा आफैंलाई 'प्राप्त' गर्नुहुन्न भने अरूले पनि तपाईंलाई बुझ्न गाह्रो आशा गर्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै तिमी को हो थाहा छ।
आत्म-सचेत हुनु भनेको बाल्यावस्था र किशोरावस्थामा विकसित हुने कुरा हो, तर राम्रो प्यारेन्टिंग यस प्रक्रियामा एक आवश्यक तत्व हो।
राम्रो अभिभावकले तपाइँको भावनाहरू, तपाइँको मनपर्ने र मन नपर्ने मनपर्दछ, र तपाईंको प्राकृतिक प्रतिभा ।
उनीहरूले तपाईंलाई ध्यान र स्वीकृति दिन्छन् जुन तपाईंले चाहानुहुन्छ र प्रशंसी प्रशंसा दिनुहुनेछ।
यसलाई 'मिररिंग' भनिन्छ, मनोवैज्ञानिक हेन्ज कोहुत द्वारा विकसित गरिएको एक सिद्धान्त। यो बच्चाको आत्म-प्रशंसा र आत्म-सम्मानको विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
डिसफंक्शनल प्यारेन्टिंगको अर्थ यो हुन सक्छ कि तपाईं यस मिररिंगबाट छुटेको छ।
कसरी एक सम्बन्ध मा मूड स्विंग संग व्यवहार गर्ने
सायद तपाईका अभिभावकले तपाईलाई कुनै पनि कुरा देख्न असफल भयो वा उनीहरूले तपाईलाई वास्तविकको विपरित हेर्न चाहेको कुरा देखे?
जे होस् सम्भावना तपाईका अभिभावकहरु आफ्नो दृष्टिकोण को प्रभाव को बारे मा खुशी संग अनजान थिए, शुद्ध परिणाम एक बच्चा हो - जो एक वयस्क हुन्छ - आत्म जागरूकता वा समझ को कमी संग।
किनकि, हामीले स्थापना गरिसकेका छौं, अरूले तपाईंलाई 'पाउन' सक्नु अघि तपाईं आफैले आफैलाई 'लिन' आवश्यक पर्दछ, तपाईंको दिमागको यस पक्षमा काम गर्न आवश्यक छ।
केहि सोध्ने प्रयास गर्नुहोस् यी प्रश्नहरू आफैंलाई चिन्नको लागि र तपाईं को हो र के ले तपाईंलाई ड्राइभको बारेमा केही जागरूकता विकास गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईलाई कुन कुराले चिह्न लगाउँदछ र तपाइँ आफैंको प्रेरणालाई बुझ्नुहुन्छ भनेर अधिक परिचित हुनुभएपछि, अरूबाट तपाईंले देखेको नकारात्मकतामा दृढ रहनको लागि तपाई अझ बलियो स्थितिमा हुनुहुनेछ।
अन्तत :, तपाईं आफ्नो छनौटमा बढी विश्वस्त हुनुहुनेछ र अपरिहार्य अवसरहरू द्वारा कम प्रभावित हुनुहुनेछ जब तपाईं त्यस्तै तरंगदैर्खमा हुनुहुन्न तपाईंको वरपरका मानिसहरू।
तपाईको आफ्नै गहिरो धारणा र तपाईले पाउनु भएको अधिकारलाई बुझ्नु भनेको अरु भन्दा भिन्न हुनुका कारण र तपाई एक्लो हुनुको सताउने भावनाको बिरूद्ध राम्रो प्रतिरक्षा हुनेछ।
तपाईका वरपरका मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्।
यी गलतफहमीको भावनाहरू हटाउनको लागि अर्को चरण तपाईंको वरिपरिको मानिसहरूलाई एक नजर लिनुहोस् र तपाईं उनीहरूसँग कसरी कुराकानी गर्नुहुन्छ सोच्नुहोस्।
अनिवार्य रूपमा, व्यक्तित्वहरू जुन तपाईंले जीवनको यात्राको साथ भेट गर्नुहुनेछ तीन श्रेणीहरूमा पर्दछ:
व्यक्तित्व १ - मानिसहरु जो तपाई जस्तो उन्चाण तरंगदै छन् र सहजै तपाईँ कहाँ आउनु भएको ठाउँमा पुग्दछन्।
व्यक्तित्व २ - ती मानिसहरू जो तपाईंलाई बुझ्न चाहन्छन्, तर त्यसो गर्न केहि मद्दत चाहिन्छ।
व्यक्तित्व3- लोक जो केवल तपाईलाई प्राप्त गर्न जाँदैन, तपाईले कडा मेहनत गर्नुभयो।
आउनुहोस् हामी यी personality व्यक्तित्व समूहहरूलाई नजीकबाट जाँचौं।
पहिलो वर्गका मानिसहरुलाई अधिक धेरै व्याख्याको आवश्यक पर्दैन।
तपाईं तुरुन्त तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ जब तपाईं तिनीहरूलाई भेट्नुहुन्छ र आपसी समझ स्वत: हुन्छ।
र यो कस्तो आनन्दको कुरा हुन्छ जब यो हुन्छ।
यो दुखको कुरा हो यो एक अपेक्षाकृत दुर्लभ घटना हो।
यद्यपि यो उल्लेख गर्न लायक छ, जो मानिसहरुसँग तपाई जस्तै उही पृष्ठमा छन्, उनीहरुसंग वास्तवमा तिनीहरुसंग जोड्नको एक मात्र तरीका भनेको आफैलाई खुला हुन दिनु र एक तरीकाले कमजोर हुनु हो।
तपाईको भित्री आत्मको रक्षा नगर्नुहोस् र अन्तर्क्रिया सतही राख्नुहोस्।
खोल्ने एक मात्र तरिका हो तपाईंले तिनीहरूलाई साँचै छोड्ने र तिनीहरूलाई तपाईंलाई सही बुझ्ने अनुमति दिन सक्नुहुन्छ।
अन्यथा, तपाईं सँधै ईन्ग्मा रहनुहुनेछ जुन तपाईं अरू हुनुहुन्छ।
यथार्थवादी रूपमा तपाई दोस्रो भन्दा धेरै धेरै भेट्न आउनुहुनेछ पहिले भन्दा, तर यी सम्बन्धहरू पनि अत्यन्तै सन्तोषजनक हुन सक्छन्।
तपाईं भर्खरै काम गर्न इच्छुक हुनुपर्छ उनीहरूलाई वास्तविक, प्रामाणिक बुझ्नमा मद्दत गर्न।
तिनीहरू तपाइँका लागि खुला छन्, तर ठीक समान तरंगदैर्खेमा होइन, त्यसैले यदि तिनीहरू वास्तवमै तपाईं को हुन् भनेर चिन्नु पर्छ भने यो सहायता आवश्यक छ।
आत्म जागरूकता र तपाईंको आफ्नै मनपर्ने र मननपर्ने र प्रेरणाहरू सञ्चार गर्ने क्षमता, माथि वर्णन गरिए अनुसार, उनीहरूको समझ अनलक गर्न महत्वपूर्ण छन्।
मलाई लाग्छ मेरो प्रेमी द्वारा स्वीकार गरीएको छ
यदि तपाईं आत्म-सचेत रहन को कौशल अभ्यास, तपाईं एक राम्रो जडान बनाउन को लागी राम्रो हुनेछ।
तपाइँको विचारहरू तल लेख्नुहोस् र तिनीहरूलाई केहि प्रकारको तार्किक क्रममा राख्नुहोस्। यसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ आफैलाई स्पष्टसँग वर्णन गर्नुहोस् , जसले प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँदछ।
र अन्तिम कोटीका मानिसहरु लाई के हुन्छ?
यो सत्य हो कि, उनीहरूसँग डिल गर्न सबैभन्दा गाह्रो व्यक्ति हुन सक्छ किनकि तिनीहरू अरू कसैको दृष्टिकोणलाई देख्न मात्र सकेका छैनन्।
तिनीहरू त्यस्तो प्रकारका हुन् जसले समय र शक्ति प्रयोग गर्दैनन् न अरूको विचारहरू बुझ्न।
उनीहरूले कहिल्यै यो विचारको लागि आफ्नो मन खोल्दैनन् कि अरुहरूसँग उनीहरू भन्दा फरक हुनुपर्ने वैध अधिकार छ।
वा, तिनीहरूसँग अरू सबैको बहिष्करणको लागि तिनीहरूको आफ्नै विचारमा गहिरो विश्वास छ।
तपाईले यी सम्झौताविहीन व्यक्तिहरूसँग कसरी व्यवहार गर्न सक्नुहुनेछ, जसलाई तपाई चाहानुहुन्छ बारम्बार आउँनुहुन्छ?
सत्य यो हो, तपाईलाई आफ्नो जीवनमा यी व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्दैन।
जब तपाईं आत्म-सचेत हुनुहुन्छ र आफ्नै विश्वासहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि तपाईंले गर्नुहुन्न सबैलाई स्वीकृति आवश्यक छ - केहि व्यक्तिहरू, हो, तर सबै होइन।
अन्य व्यक्तिको राय कम महत्त्व गर्न शुरू हुनेछ।
सास खेर फाल नगर्नुहोस् र आफैलाई तनावमा नपर्न दिनुहोस् तिनीहरूको हठी इन्कारले झुकाउन।
स्वीकार गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् कि सबैजना तपाईलाई 'प्राप्त' गर्दैनन्।
यो मनमा राख्नु लायक छ कि मनपराउनु पर्ने र सामाजिक रूपले स्वीकार्नु पर्ने आवश्यकता पनि दुखको स्रोत हुन सक्छ।
त्यसैले धेरै धेरै हुप्स मार्फत उफ्रिनेबाट सावधान हुनुहोस् कृपया अरूलाई र ती तपाइँलाई बुझ्नको लागि प्राप्त गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ प्रयास गर्नुभयो र सफल भएन भने, यसलाई स्वीकार्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्।
सबैलाई मित्र बनाउने प्रयासमा तपाईंको समय खेर फाल नगर्नुहोस्।
यो ठीक हुनु ठीक छैन मन पराइएको छैन । यो मानवीय आवश्यकता को बिरूद्ध जान्छ।
तर यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने केही सत्य फेला पार्न सक्नुहुन्छ भावनात्मक आत्मा र अरूहरू जसले तपाईंलाई बुझ्नको लागि पर्याप्त प्रयास गर्छन्, तपाईलाई चाहिने हो ।
जब तपाईंसँग तपाईंको जीवनमा यी प्रकारका व्यक्तिहरू छन्, तपाईं आफैंमा पर्याप्त आत्मविश्वास महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंलाई जस्तो कि सबैलाई आवश्यक पर्दैन वा तपाईंले जीवनमा लिनुहुने मार्गलाई अनुमोदन गर्नुपर्दैन।
एकचोटि तपाईले अधिक सुरक्षित र आत्म-सचेत महसुस गर्नुभयो भने, तपाईले अरू मानिसहरु लाई नबुझ्नु भनेर सही कुरा गर्नेलाई बुझ्नु हुन्छ र तपाईको न्यायिक मनोवृत्तिबाट तपाई कम प्रभावित हुनुहुनेछ।
सबैजनाको आफ्नो रायमा अधिकार छ - पनि '3s'।
यहाँ प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो राय राख्न अधिकारको बारेमा अन्तिम शब्द।
ती अपमानजनक लोक जोसँग आफ्नै अकाट्य विचारहरु छन् र तपाई वा अरु कसैलाई कुनै छुट दिन तयार छैनन् ...
... पनि तिनीहरू बिल्कुलै हकदार छन् उनि जस्तो गरीन्छन्।
हो, मलाई थाहा छ यो कष्टदायक छ।
तर यहाँ किन हो ...
जब हामी साथ सामना गरिरहेका छौं जिद्दी अरूहरूको, यो सबै गर्न सजिलो छ नकारात्मक भावनाहरूको चक्रमा फस्न।
dr dre सँग कति पैसा छ
हामी आफैंलाई विश्वास दिलाउँछौं कि हाम्रो आफ्नै विचारहरू सही छन्, बढ bud्ग गर्न इन्कार गर्दै, र हामीलाई लाग्छ कि हामी विरोध गर्दैछौं त्यत्ति असक्षम हुन्छौं।
यद्यपि यो बुझ्नु साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छ कि हामी सबैको व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा अधिकार छ - ती व्यक्तिहरू पनि जुन तपाईको निराशाको कारण हुन सक्छ।
यो सम्झन लायक छ कि कुनै पनि व्यक्तिको व्याख्या र वास्तविकताको आफ्नै संस्करणको समझ धेरै चीजहरूले आकार दिन्छ।
तिनीहरूको जीवनका अनुभवहरू, तिनीहरूको विश्वास र धार्मिक प्रणालीहरूमा आधारित धार्मिक प्रणाली वा सांस्कृतिक 'मापदण्डहरू,' र तिनीहरूको जन्मजात व्यक्तित्व सबैले उनीहरूले संसारलाई कसरी देख्छन् भनेर योगदान पुर्‍याउँछन्।
सबैको विश्वास, अनुभव, आदि भएकोले। उनीहरूको लागि अद्वितीय हो , कुनै पनि दुई व्यक्तिले उनीहरूको वरपरको संसारलाई ठीक उही तरीकाले व्याख्या गर्दैन।
तिनीहरूको व्याख्या, बुझाइ, र अपेक्षाहरू फरक हुन्छन्, कहिलेकाँही मौलिक रूपमा।
उदाहरणको लागि, एक व्यक्तिले सोच्न सक्छ कि केही गिलास वाइन पिउनु भनेको कामको तनावलाई कम गर्ने राम्रो उपाय हो, जबकि अर्कोले रक्सीलाई सबै खराबीको जड मान्दछ।
न त मनोवृत्ति सहि वा गलत हो।
प्रत्येक व्यक्तिले वैकल्पिक दृष्टिकोणबाट फरक अपेक्षाहरू सहित संसारको व्याख्या गर्दछ।
गहिरो बसेको विश्वास विकास गर्न यत्ति सजिलो छ कि तपाईंको आफ्नै परिप्रेक्ष्य सही छ, तर वास्तवमा, 'मेरो मार्ग वा राजमार्ग' मनोवृत्ति सहयोगी हुँदैन।
कसले भन्न सक्छ कि तपाईंको तरिका अरू कसैको भन्दा बढि मान्य छ?
डिज्नी को सन्तान अनलाइन नि: शुल्क हेर्नुहोस्
तथ्य यो हो कि उनीहरूले तपाईंको दृष्टिकोण बुझ्दैनन् वा तपाईंले आफ्नो जीवनको मार्ग रोज्नुभएको तरिकालाई तिनीहरू गलत छन् भनेर भन्न खोजेको होइन।
तपाईंसँग प्रत्येकको आफ्नै विचार, दृष्टिकोण र व्यवहारमा बराबर अधिकार छ।
तपाईंको आफ्नै भविष्यमा सन्तुष्टिका लागि, तपाईंले यो अवधारणालाई बुझ्ने र बुझ्ने क्षमताले तपाईंलाई अझ राम्रो सम्बन्ध विकास गर्ने मार्गमा सेट गर्ने पाउनुहुनेछ।
यो सबै यस आधारभूत सत्यको पूर्ण हृदयस्पर्शी स्वीकृतिमा आउँदछ: यदि 'उनीहरूले तपाईंलाई बुझ्दैनन् भने, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंहरू दुवै सही हुनुहुन्छ वा गलत।
यो केवल विभिन्न दृष्टिकोणको कुरा हो जुन हामी सबै व्यक्तिविशेषको रूपमा हकदार छौं।
यदि तपाईंले आफूलाई यो लेख पढ्ने पाउनु भयो भने, यो सुरक्षित शर्त हो कि तपाईं अरूले गलत अर्थ लगाउनुहुन्छ।
र यो एक त्यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ जहाँ यसले वास्तवमा तपाईंको भावनात्मक कल्याणलाई असर गरिरहेको छ।
यो टाढा पुगे पछि, म आशा गर्दछु कि तपाई अब यो हेर्न सक्नुहुनेछ कि यो परिमार्जनको कुञ्जीले तपाईको आफ्नै पहिचानको बलियो भावना विकास गर्दैछ।
आफैंलाई राम्ररी चिन्ने बित्तिकै, तपाईंले आफ्नो जीवनको बाटोमा सुरक्षित महसुस गर्नुहुनेछ।
अर्को चरण भनेको तपाईको जीवनमा व्यक्तित्वको प्रकारलाई स्वागत गर्न हो जुन इच्छुक र सक्षम छन् तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ तपाईंलाई स्वीकार्नुहोस् र जसको बीचमा तपाइँ आफू साँच्चिकै महसुस गर्नुहुन्छ।
त्यसो भए केवल दुई चरणहरू बाँकी छन्: साधारण तथ्यलाई स्वीकार गर्न कि त्यहाँ सँधै मानिसहरू छन् जुन तपाईंलाई बुझ्न असमर्थ छन् र सबैले आ-आफ्ना धारणाको लागि हकदार छन् भनेर स्वीकार गर्न - यो मन पराउछ वा छैन।
निश्चित हुनुहुन्न कि भावनाको बारेमा के गर्ने कि कसैले तपाईलाई बुझ्दैन? आज एक सल्लाहकारसँग कुरा गर्नुहोस् जो प्रक्रिया मार्फत तपाईंलाई हिंड्न सक्दछन्। केवल एक संग कनेक्ट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
शब्दमा आफ्नो भावना व्यक्त गर्न कसरी
एक्लोपनासँग कसरी व्यवहार गर्ने र अलगावको भावनाहरूको सामना गर्ने
एक इम्प्याथ हुनुको बारेमा कसरी कुरा गर्ने
कसरी ख्याल नगर्ने मान्छे के सोच्छन्
तपाइँको 'आत्म-अवधारणा' ले तपाइँ र तपाइँले सोच्नुहुने सबै कुरा नियन्त्रण कसरी गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्
कसरी एक हारेको जस्तो महसुस रोक्न
अझै पनी wwe मा हुनुहुन्छ
कुनै साथीहरु संग कसरी व्यवहार गर्ने
बोर हुँदा गर्न को लागी चीजहरुको सूची
एक जिद्दी पति संग कसरी व्यवहार गर्ने
तपाइँ भर्खरै भेटेको कसैको प्रेममा पर्नु